Landscape Lighting Vagadziri & Vatengesi - China Landscape Mwenje Factory
Yakanakisa Kutengesa Yekusimudzira Mutengo Mobile App Kudzora Kwakatungamirwa Strip Mwenje Isina Mvura
Mwenje yemwenje yemakamuri ekurara Makara akakosha mukukura kwepfungwa dzevana sezvo tsvagiridzo inoratidza kuti mavara anoita basa rakakosha muIQ yevana, EQ uye hunhu. Kushongedzwa kwekamuri Dzidziso yezvepfungwa inoratidza kuti mavara ane hukuru mukusimudzira manzwiro evanhu. Mavara akasiyana anopa vanhu manzwiro epfungwa akasiyana uye ane mhedzisiro pane hutano hwevanhu. Dorm yekushongedza Gadzira rako rako mwenje mwenje uye rega riunze iwe kunofara mamiriro uye kurerutsa kuneta kwako ...
Yakakwira Hunhu Chigadzirwa Nesimba Kuchengetedza Uye Dziviriro Yezvakatipoteredza Yakatungamira Mwenje Strip Isina Mvura
Ultra-refu yakatungamira mwenje mitsetse yemumba Cozylady, iyo indasitiri yekutanga kuwana budiriro yehunyanzvi mu12v mwenje mitsetse inodarika 15m, zvirinani zvirinani kushongedzwa kwemhuri. Tine makore makumi maviri ezviitiko zvakagadzirwa mukugadzirwa kwechigadzirwa uye kugadzira. Chinangwa chedu ndechekuvandudza uye mhando yepamusoro. Zvigadzirwa zvedu zvakaitwa nenzira dzakawanda dzekuongorora usati wasiya fekitori kuti uve nechokwadi chehunhu uye chengetedzo zviyero zvekugutsikana uye kuvimba kwako. Wifi mwenje ubvise's yakasarudzika fe ...
Fekitori Yakanangana Kutengesa Yakakwira Yakakwira Nhare mbozha App Remote Kudzora Pane Uye Kunze Mbiri Mwenje Led Strip
【LED tambo inowira pasi?】 Zvinoenderana nerevo yevatengi, isu tangoita gadziriso dzakakosha- chafariz conductive inonamira kugadzirisa. Sezvo nguva yekushandisa painowedzera, iyo viscosity inowedzera. Asi kunyangwe hazvo yakanakira kunamatira, tambo yechiedza chemakumi maviri inopfuura saizi uye huremu hweyakajairika, saka isu tinogadzirira zvekusimbisa kugadzirisa dambudziko reiyo mwenje mwenje unowira pasi. Vimbiso Yedu: Kana iwe uchida zvimwe zvekuwedzera 3M tepi zvishongedzo, ndapota nyorera vatengi vedu. 【...
Fekitori Yakanangana Kutengesa Yakakwira Mhando Inotsigira Akawanda Mazhinji Nhare mbozha Anodzora Bluetooth Led Strip Mwenje
Sync neMumhanzi Inonakidza mimhanzi modhi, yakavakirwa-mukati yakanyanya inonzwika maikorofoni, mavara anochinja otomatiki zvichienderana nemimhanzi inoridza / ambient kurira. Kutanga mimhanzi pati neiyi marara emwenje. Inogona kugadzira yerudo, yakanaka, inonakidza, yemashiripiti mamiriro epati yako. Izvi zvichaita kuti nguva yepati yako isakanganike. Nakidzwa nemutambo wako wepati nemamirioni emavara. Wide Kunyorera Aya marara asina mvura akagadzirirwa yekushongedza kwemukati nekunze. Inogona kushandiswa nyore nyore chero kupi, tora ...
Yakanakisa Kutengesa Yekusimudzira Mutengo Mobile App Remote Kudzora Pane Uye Off Led Magetsi Strip Mwenje
Smareal 50FT / 15M LED Strip Mwenje inounza yako yekuona mabiko Hupenyu hunoda pfungwa yetsika, mavara ane mwenje anoita kuti hupenyu hwako huregedze uye hunakidze. unogona kuchinjisa kamuri kuita masitaera akasiyana siyana.Rega iwe unyatso nyudza mune inodziya, inotonhorera. Mwenje yeLED yakakosha kumakicheni, dzimba dzekurara, kuvhenekerwa kweTV, mazororo, kana zviitiko zvemhuri.Chipo chikuru chemhuri yako neshamwari. Chiyeuchidzo uye Nguva Yekushanda LED mwenje wechiedza ine chiyeuchidzo basa, inogona kurangarira iyo modhi iwe yawakaisa kare.nesma ...
Yakakwira Hunhu Chigadzirwa Nhare mbozha App Remote Kudzora Pane Uye Kunze Kwakatungamirwa Strip Mwenje Remote Kudzora
Timing Led Lights Strips, Unogona kugadzirisa mwenje kubhenekera kuti ienderane nenzvimbo dzakasiyana siyana, Mwenje yemwenje yakatungamirwa ine basa rekurangarira, kana iwo mabhendi achishandiswa zvakare, vanoyeuka marongero emamiriro ekupedzisira vasina kumisazve, neiyo smart App, unogona kuona iyo nguva yekuita basa, otomatiki batidza uye bvisa panguva yakatarwa, 28 Dynamic Modes inogona kusarudzwa, iwe unogona zvakare Diy yako yakasarudzika kara Multiple Scenes Inowanikwa, Led strip inogona kushandiswa pakushongedza yako Kudya imba, Kamuri yekurara, Kumusoro, Vharanda, Co. ..
Yakanaka Mutengo Yakanaka Hunhu Simba Kuchengetedzwa Uye Yekudzivirira Dziviriro Wifi Strip Mwenje
Vhenekera Kona yega yega Nyore kusvika chero uine imba yako ine 32.8ft mwenje mutsara. Vhenekera makamuri mazhinji mune imwe nzira. Usambofa wakada kutsvanzvadzira nezvinhu zvaunoda murima. Enhanced Music Mode Sync yako Alexa LED mwenje tambo nemimhanzi yako yaunofarira kune yakawanda mavara yekuteerera chiitiko. Simudzira pati neinonakidza modhi modha kana kusimudzira yakapfava, mimhanzi inozorodza mune yakadzikama modhiyo. Kudya muKunakidzwa Ambiance Yakakwirira inochinjika inoita kuti ive mhepo yekugadzika kwekona. Iva nekudya kukuru uye f ...
Yakanaka Mutengo Yakanaka Hunhu App Pamhepo Kuvandudza Yakatungamira Strip Mwenje Flexible
Katatu Kudzora Sarudzo: Gadzirisa ako akangwara e LED marara emwenje neiyo Govee Kumba app, iri kure controller, kana chengetedzo bhokisi. Iyo Govee Kumba app zvakare inokupa iwe kupinda kune anopfuura mamirioni gumi nematanhatu mavara, makumi matanhatu emamodhi modhi, uye zvimwe zvinhu. Enhanced Music Mode: Nekuda kune yakavakirwa-mukati, yakanyanyisa inonzwika maikorofoni, unogona kuyananisa akasiyana marudzi emimhanzi kune iyo LED mimhanzi mitsara marambi. Raramisa mapato ako neyakaomarara modhi kana zorora zviri nyore nemamiriro akadzikama Smart Ruvara Kuzivikanwa: Iyo yakangwara kara yekutora ficha inobvumira iyo ...
Fekitori Yakatungamira Kutengesa Yakakwira Hwakanaka Nguva Yekuita Rinoshanda Smart Led Mwenje Strip
Kudya muKunakidzwa Ambience 16.4 tsoka akakodzera kushongedza yako kicheni kaunda. Ivai nekudya kukuru uye newaini yakanaka mukuzorora mumhepo. Shongedza Kamuri yekurara Inogadziriswa kupenya uye akawanda mavara anokugonesa iwe diy sezvaunoda. Dimisa mwenje uye gadzira raunofarira ruvara neremote controller kana Govee imba app. Nakidzwa nenguva yako wakasununguka. Nguva Yemafaro Batidza mimhanzi panotanga mutambo wako. Tamba neshamwari dzako mune inesimba kana yakadzikama modes uye inopenya mwenje mavara. Inobatsira Izwi Rubatsiro: Simba iwe ...
Yakanakisa Kutengesa Yekusimudzira Mutengo Inotsigira Akawanda Nhare mbozha Kudzora Kwakatungamira Rgb Strip Mwenje
Triple the Control: Tora kutonga kweako mwenje mwenje neGovee Kumba app, iri kure, kana bhokisi rekutonga. Nekombiki yakagadzikana yekubatanidza, unogona kuchinja mavara, simbisa mwenje pa / kudzima, kana kugadzirisa kupenya mukati me10m / 32.8ft control renji. Vhenekera Mumhanzi Wako: Iyo yakavakirwa-mukati, inononoka mic inokutendera iwe kuyananisa mwenje yeUSD kumimhanzi yako yaunofarira. Kuva nemutambo wevhiki? Jazz it kumusoro nemagetsi-anochinja mwenje anotamba kune rwiyo rwe chero rwiyo. Gadzirisa Yako Mwenje: Iine iyo DIY modhi, v ...
Yakanakisa Kutengesa Yekusimudzira Mutengo Simba Kuchengetedza Uye Dziviriro Yezvakatipoteredza Smart Led Strip Mwenje
16.4ft Rgb Led Strip Mwenje SMD: 5050 150 leds Ruvara: RGB 5050 DIY Kureba: 1 * 5meters / 1 * 16.4ft Isina mvura: Hapana SGS US Certification Simudzira 24 Kiyi IR Remote Kudzora Mini Controller 24 makiyi IR kure Kudzora kure: <8M ( Inofanirwa kunge ichirova paMini inogamuchira pasina zvipingaidzo) 12V Yakachengeteka Adapter Inopindirwa: 100-240V Kuburitsa: DC12V / 2A UL & FCC Certification 5050 Colors DIY basa Ruvara chinoshandura chakatungamira mwenje mwenje ine yakasarudzika yakagadzirirwa R / G / B yakasanganiswa kudzikira, Iyo max inotsigira 5050 DIY ruvara. Kana ...
Yakanaka Mutengo Yakanaka Hunhu Simba Kuchengetedzwa Uye Dziviriro Yezvemvura Isina Mvura Led Strip Mwenje
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa nechikwata chedu chekuvandudza uye isu tine yedu fekitori. Isu tinovavarira kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye neyakanakisa yekutenga ruzivo kune vatengi. Iyi RGB LED Strip ndicho chigadzirwa chedu chitsva, ine yakasarudzika encoding chirongwa controler. Iyo inouya ne4096 DIY mavara, gumi nematanhatu kupenya kuchinjika uye 6 inesimba kupenya mode. Zvakare, Kurara maitiro, yakanyatsogadzirwa neiyi rgb strip, kana iwe ukadzvanya iyo yekurara mode bhatani, iyo mwenje turnto orenji mwenje ndiani anogona kubatsira sl ...